Tag land rights and business - Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB)
You are here Home » Tags » land rights and business
ဇူလိုင် 02, 2018 in ရင်းမြစ်များ
A near-final Myanmar translation is available of the Food and Agriculture Organisation (FAO’s) Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure (VGGT) of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security...
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေယာအခွင့်အရေးများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အနှစ်ချုပ်စာစောင်ကို ပြင်ဆင်ရေးသားရန် ဆွေးနွေးတွေ့ဆုံပွဲ
မေ 24, 2018 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
၂၀၁၈ ခုနစ်၊ မေလ (၂၂) ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ MCRB သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေယာအခွင့်အရေးများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အနှစ်ချုပ်စာစောင် (မူကြမ်း) နှင့် ပတ်သက်ပြီး အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပ၍ တက်ရောက်လာသူများထံမှ ဝေဖန်အကြံပြုချက်များကို တောင်းခံခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနစ်
MCRB/OXFAM တို့မှ ပူးပေါင်း၍ ကျင်းပသည့် မြေယာအခြေပြု နှစ်ရှည်သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူမှုရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပေါ်ထွက်လာရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
မေ 07, 2018 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
On 27 April, Oxfam and MCRB hostedamulti-stakeholder discussion on ‘Responsible investment in plantation agriculture' in Yangon.
ဒီဇင်ဘာ 19, 2016 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
MCRB and the Thilawa SEZ Management Committee and JICA Expert Team heldaseminar for the Yangon Regional Government staff on ‘Good Practice Approaches to Land Acquisition and Resettlement Peri-Urban and Urban Environments’.
Defining Good Practice Approaches to Land Acquisition and Resettlement in Myanmar
The IFC has published the workshop summary and presentations foramultistakeholder workshop it held on defining good practice approaches to land acquisition and resettlement in Myanmar in May.
UN Guidelines on Development-based Evictions and Displacement
ဇူလိုင် 07, 2015 in ရင်းမြစ်များ
The UN Special Rapporteur on Adequate Housing asaComponent of the Right to an Adequate Standard of Living draftedaset of Basic Principles and Guidelines on Development-based evictions and Displacement in 2007 which are now available in Burmese.
Briefing Paper on Land Issues in Myanmar
ဧပြီ 02, 2015 in ရင်းမြစ်များ
MCRB has publishedabriefing paper on land issues in Myanmar, is part of an occasional series. It is intended to assist businesses investing in Myanmar that are conducting due diligence on land and seeking an understanding of the current landscape...
“လယ်ယာမြေအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း” သင်တန်း သတင်း
ဒီဇင်ဘာ 17, 2014 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
၂၀၁၄-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁-၁၂-ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေး အထောက်အကူပြုဌါန (MCRB) မှ တောင်သူလယ်သမားကွန်ရက်များ၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ “လယ်ယာမြေအခွင့်အရေးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း” သင်တန်းတစ်ခုကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဇူလိုင် 25, 2014 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
MCRB at the Asean People Forum 2014
ဧပြီ 23, 2014 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ
On 22 March 2014, the Myanmar Centre for Responsible Business hostedaworkshop entitled “Promoting Inclusive and Responsible Business: Experiences of Myanmar, Singapore and Across ASEAN” at the ASEAN People’s Forum on Business and Human Rights.
မြန်မ်မာပြည်သ်သ့ဖူ့ဖူ့ ရိုရို မ်၏်၏်၏ ထုတုတုတ်ြ်ြ်ပြန်ေ်ေ်ြေ ညာခ်ျ ဒီဇီဇင်ဘ်ဘာလ (၃၀) ရ် ၂၀၁၃ ခုနုနုနှစှစှစ
ဇန်နဝါရီ 21, 2014 in သတင်းမီဒီယာစင်တာ